I-Bentley kunye neetekhnoloji zayo "ezivelayo" zokucinga nge-radar-iGeofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/I-XNUMX kunye neetekhnoloji zayo "ezivelayo" zemifanekiso ye-radar
I-XNUMX kunye neetekhnoloji zayo "ezivelayo" zemifanekiso ye-radar
Kwakungenye yezinto endizilindayo xa ndihamba intetho I-Baltimore ngoMeyi ukubona ukuba yeyiphi i-3 ebonelela ngemifanekiso ye-XNUMXD.
Sebenzisa imifanekiso ye-3D kwiMicrostation
Yayingumboniso owenziwe ngu RIEGL USAInkampani ezinikele ekuboneleleni nge-laser capture and processing services, i-RIEGL yazalelwa e-Austria kodwa inenkqubela kumazwe aliqela kubandakanya i-United States. Nangona iphepha labo lewebhu lingenanto ngokubhekisele kwizicelo ezenzelwe le njongo, kumboniso babonakalise ukusebenza okunomdla kokungenisa ilifu lenqaku ngokuthe ngqo Ri Scan Scan ukuya kwi Microstation ... ngamaqhosha athile ukuze ubonakalise umboniso.
U-Ted Knaak, umongameli wakhe ngulowo wenza lo mboniso, ngelishwa akukho lwazi kwi-intanethi ... ke eyona nto ilungileyo yile qha ga mshelana nabo ngqo.
Omnye umboniso ocwangcisiweyo obonakalayo ukuba ezinye "izinto ezivelayo" zaziza kubonisa khange zenzeke… ke akukho nto ingako inokubonisa. Okwangoku iTerrascan, iCloudworx, iNkanyamba kunye nezinye ezinje ngayo zisezezinye iindlela, akukho nto ivela kwiMicrostation.
Ixesha elizayo "elihlumayo"
Xa iBentley ingenazixhobo zikhethekileyo, inika iinkampani zabucala ezisebenza ngezisombululo kwaye ezi zihlala zibizwa ngokuba "zivela". Akukho nto imbi, iBentley yenza kakuhle kakhulu ukunika amathuba kumaqabane aphuhlisa izicelo zokuncedisa ezinje yobizo.
Kodwa ndikhumbula iminyaka emi-4 eyadlulayo ukuba uBentley wayithathela ingqalelo iMontage Montage "evelayo", eyenze oko iinguqulelo ngaphambi kweXM zazingenako; iimephu ezintle. I-Montage yeNkampani yandisa ukusebenza okuhle kakhulu ukuvelisa ubume obunempawu ezintle kakhulu ezinje ngokukhanya, izithunzi, izinto zokufota kunye neetemplate zokuprinta.
NjengesiXM, iBentley fu maneka iimveliso zayo "zivela" kwaye ngoku ibizwa ngokuba yi-CAD Scripts kunye neMephu yeScript. Ke kuyakufuneka ukuba ubone ukuba kwenzeka ntoni ngophuhliso lwe-RIEGL kwiminyaka emi-4.
Okwangoku ... akukho nto kwi-XNUMX yemifanekiso ye-LIDAR, qhagamshela kuphela ukuqala kwakho kwaye ulinde iMicrostation Atene, elindeleke ukuba ikhutshwe kamva kulo nyaka.
Isayithi elungileyo le-IMS elidalwa ngeNgcaciso
Qhagamshelana noMhlaba oyiNtlabathi kunye ne-ArcGIS 9.3
Iinguqulelo zeV8i sele ziquka ukuxhasa amafu
Ukungenisa iTables kwi-AutoCAD okanye kwi-Microstation